ခရစ်တော်ဘုရား၏ဘုန်းတော | The Source of Christ's Glory | Real Conversion
( ဟေရှာယ ၅၃ထဲက ၁၄ခုမြောက်သောဒေသနာတော်)
၂၀၁၃၊ ဧပြီလ ၂၁ရက်၊ လော့စ်အိန်လိတ်မြို့၊ တဲတော်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်၊ သခင်ဘုရားနေ့၊ နံနက် ပိုင်း ဝတ်ပြုအစည်းအဝေး၌ ဟောကြားသောဒေသနာတော်၊
Lord’s Day Mornin, April 21, 2013
“ထိုသို့မိမိအသက်ကို သေခြင်းသို့သွန်း၍ မတရားသောသူတို့နှင့် ရေတွက်ဝင်းခြင်းသို့ ရောက်သဖြင့်၊ လူများတို့၏အပြစ်ကိုဆောင်၍ မတရားသောသူတို့အဖို့၊ တောင်းပန်သော ကြောင့်၊ ကြီးမြတ်သောသူတို့နှင့်အတူ သူ့အဖို့ဖြစ်စေခြင်းငှါ ငါခွဲပေးမည်။ အစွမ်းသတ္တိ ရှိသောသူတို့နှင့် လက်ရဥစ္စာများကို သူခွဲဝေလိမ့်မည်”။ (ဟေရှာယ ၅၃း၁၂)။
၁၇ရာစု၊ (၁၆၀၁-၁၆၆၉)တွင် ဂျွန်ထရတ်သည် ဖျူရီတန် တရားဟောဆရာကြီးတစ်ပါးဖြစ်ခဲ့ သည်။ သူသည် ဇွဲလုံ့လဝိရိယရှိသော တရားဟောဆရာအဖြစ် ထင်ရှားခဲ့ပါသည်။ သူ၏အနက်ပြန် ကျမ်းများသည် ကျမ်းစာတစ်အုပ်လုံးကို မှီငြိမ်းထားသဖြင့်၊ နုတ်ကပတ်တော်လေ့လာရာတွင် အကောင်းဆုံး ဗျူရီတန်ကျမ်းစာအုပ် ဖြစ်ခဲ့သည်။ စေ့စပ်သေချာမှုနှင့် ကျယ်ပြန့်သော အဓိပ္ပါယ်ရှိမှုက အကောင်းဆုံးက်ျးစာ တစ်အုပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ (Elgin S. Moyer, Ph.D., Who was Who in Church History, 1974, p. 410).. ထရတ်၏ အနက်ပြန်ကျမ်းကို စပါဂျန်က လုံး၀ထောက်ခံ အားပေးခဲ့သည်။ ဟေရှာယ ၅၃နှင့်ပါတ်သတ်၍ ဂျွန်ထရတ်ရေးသားအနက်ပြန်ထားသည်မှာ၊
နုတ်ကပတ်တော်တစ်ခုချင်းစီ၌ လေးနက်မှုရှိနေခြင်း၊ တမန်တော်များနှင့်ဧဝံဂေလိဆရာများ၊ ကျွန်ုပ်တို့အဖို့ ကယ်တင်ခြင်းစသောဖော်ပြချက်များကို လေးစားထိုက်ပေ၏။ ပရောဖက်များ လည်းလိုအပ်သည်ကို ဖော်ပြခဲ့၏။ ရေးသားရာတွင်လည်း ဝိညာဉ်တန်ခိုးပြည့်စုံလျှက်၊ ရေး သားခဲ့၏။ အထူးသဖြင့် သခင်ယေရှုသည် ပုံစံနှစ်မျိုးဖြစ်သော လူသားဇာတိ နှိမ့်ချစွာ ရူအးကလာခြင်းနှင့်ချီးမြောက်ခြင်းကိုလည်း တွေ့ရသည်။ သမ္မာကျမ်းစာ ရေးသားသူတို့လည်း ဓမ္မဟောင်းကျမ်းများထဲက ကိုးကားလျှက် ဓမ္မသစ်ကျမ်းကို လေ့လာကြသည်ကို တွေ့ရမည် ဖြစ်သည်။ (John Trapp; A Commentary on the Old and New Testament, Transki Publications, 1997, volume III, page 410).
ဒီမနက်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ရွှေကျမ်းချက်မှ “အလင်းချေးငှါး” ထားသဖြင့် ဓမ္မသစ်ကျမ်းကို ဖတ်သောအခါ လွယ်ကူစွာ နားလည်စေမည်ဖြစ်သည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းက ဟေရှာယ ၅၃ကို ရှင်းလင်းပေးနေခြင်း မဟုတ်ဘဲ၊ ဟေရှာယ ၅၃က ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာကို ရှင်းလင်းပေးခြင်းဖြစ်၏! အခြေအနေနှစ် မတူညီ ချေ။
ဒေါက်တာ ဂျက်စ်ဝါတန် ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ “ဟေရှာယ ၅၃၏ အဆုံးသတ်အပိုဒ်ငယ်တွင် ကယ်တင်ရှင်သည် မိမိအသက်ဝိညာဉ်ကို မတရားသောသူတို့နှင့် ရေတွက်ဝင်ခြင်းသို့ရောက်၏ဟု လေးစားဖွယ်ရေးသားသည်ဟု ဆို၏” (Jack Warren, D.D., Redemption in Isaiah 53, Baptist Evangel Publications, 2004, p. 31).
“ထိုသို့ မိမိအသက်တာကို သေခြင်း၌ သွန်း၍ မတရားသောသူတို့နှင့် ရေတွက်ဝင်းခြင်းသို့ ဝင်ရောက်သဖြင့်၊ လူအများတို့၏အပြစ်ကိုဆောင်၍ မတရားသောသူတို့အဖို့ တောင်းပန် သောကြောင့် ကြီးမြတ်သောသူတို့နှင့်အတူ သူ့အဖို့ဖြစ်စေခြင်းငှါ၊ ငါခွဲပေးမည်။ အစွမ်း သတ္တိ ရှိသောသူတို့နှင့် လက်ရဥစ္စာများကို သူခွဲဝေလိမ့်မည်”။ (ဟေရှာယ ၅၃း၁၂)။
ဒီကနေ့၊ မနက်ပင်လျှင် ခရစ်တော်သည် ခမည်းတော် အပ်နှင်းသောဆုလဒ်သရဖူကြောင့် ဝမ်းသာ ပီတိဖျာနေမည် အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ “ကြီးမြတ်သောသူတို့နှင့်အတူ သူ့အဖို့ဖြစ်စေခြင်းငှါငါခွဲပေးမည်” ဟု ကျမ်းစာ၌ လာပါသည်။ ကောင်းကင်ဘုံတွင် မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကမှ ခရစ်တော်အား ငြင်းပယ်မည် မဟုတ်တော့ပေ။ ကောင်းကင်သားအပေါင်းတို့ ကိုယ်တော်ကို ကိုးကွယ်ကြပေမည်! အဘခမည်းတော်၏လကျာFဘက်၌ စံပယ်လျှက်၊ ဘုန်းတန်ခိုးတော်ရှိသမျှ ကိုယ်တော်၌ ရှိပေမည်။ ဂုဏ်ပြုခြင်းငှါ၊ ထိုက်တန်သောခရစ်တော်၏လုပ်ဆောင်ချက်ကား၊ ဘယ်အရာနည်း ဘာကြောင့်ကြီး မြတ်သောသူတို့အတူ သူ့အဖို့ဖြစ်စေခြင်းငှါ ခွဲပေးသနည်း¿ အကြောင်းမှာ ကိုယ်တော်သည် ကြီးမြတ် သောအချက်လေးကို ပြီးစီး၍ဖြစ်သည်။
၁။ ပထမ၊ ကိုယ်တော်သည် မိမိအသက်ကို သေခြင်း၌သွန်းခဲ့သည်။
“ထိုသို့ မိမိအသက်ကို သေခြင်း၌သွန်း၍” (ဟေရှာယ ၅၃း၁၂)။
ခရစ်တော်သည် စဉ်းစားခြင်ဆင်လျှက်၊ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ မတော်တဆလုပ်ဆောင်ခြင်းမဟုတ် တွေးခေါ်မြော်မြင်လျှက်၊ ဂရုတစိုက်ပြုခဲ့၏။ မိမိ၏အသက်ဝိညာဉ်ကို တဖြည်းဖြည်းချင်း အဆုံးတိုင် သွန်းလောင်းမူခဲ့ပါသည်။ ကိုယ်တော်မိန့်တော်မူသည်ကား၊
“အမှုပြီးပြီဟု မိန့်တော်မူလျှက်၊ ခေါင်းတော်ကို ငိုက်ခိုက်ညွတ်၍ အသက်တော်ကို စွန့် တော်မူ၏” (ယောဟန် ၁၉း၃၀)။
“ကိုယ်တော်သည် အလိုအလျှောက် မိမိအသက်တာကို စွန့်တော်မူခဲ့သည်။
“ငါသည် ကိုယ့်အသက်ကို စွန့်၍ . . . ငါ့အသက်ကို အဘယ်သူမျှ မလုမယူ ကိုယ်အလိုအ လျှောက် ငါစွန့်၏” (ယောဟန် ၁ဝး၁၇)။
ဤအရာသည် အရေးကြီးသောအချက်ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်သည် မတော်တဆသေခြင်းမျိုးဖြင့် အသေခံခြင်းမဟုတ်ကြောင်း၊ နားလည်ရန်လိုသည်။ အပြစ်သားတို့အဖို့ မိမိအသက်ကို အလိုအ လျှေက်စွန့်တော်မူခြင်းဖြစ်သည်။ “ထိုသို့ မိမိအသက်ကို သေခြင်း၌သွန်း၍” ကားတိုင်ထက်၌ သွန်းလောင်းခြင်းဖြစ်၏။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက်၊ ယုံကြည်သူအားလုံးအတွက် ထာ၀ရအသက်ရှင် ဖို့ရန် အလိုအလျှောက်စွန့်တော်မူခြင်း ဖြစ်သည်။
ကိုယ်တော်ကို ကိုးစားပါ၊ နောက်ပြန်မလှည့်ပါနဲ့။ သင့်အဖို့ ကိုယ်တော်သည် သေခြင်း၌ပင် မိမိ အသက်ကို သွန်းလောင်းသကဲ့သို့၊ သင်လည်း မိမိအသက်ကို ကိုယ်တော်အဖို့သွန်းလောင်းပါ။ ခရစ်တော်၌ အိပ်ပျော်ပြီးနောက်တွင် သင်သည် ဘုန်းတန်ခိုးတော်နှင့် သရဖူဆောင်းနေသော ကိုယ် တော်အားမြင်တွေ့မည် ဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်သည် ဂုဏ်ပြုခြင်း ထိုက်တန်သူဖြစ်သည်။ အကြောင်း မှာ၊
“ဖြောင့်မတ်တော်မူသောသူသည်၊ မဖြောင့်မတ်သောသူတို့အတွက် ဒုစရိုက်အပြစ်များ ကြောင့် တခါခံတော်မူ၏” (၁ပေ ၃း၁၈)။
လက်ဝါးကားတိုင်တွင် သရော်ပြောင်လှောင်းခြင်းကို ကိုယ်တော်ခံခဲ့ပါသည်။ ယခုတွင်လည်း ကိုယ်တော်သည် “ကြီးမြတ်သောရာထူး” ၌ “ကြီးမြတ်သောသူတို့နှင့် ဘုန်းအသရေတော်နှင့်တကွ စံပယ်” တော်မူပြီဖြစ်သည်။ ခမည်းတော်က “လူအမျိုးမျိုးတို့ကို သူ၏အမွေဥစ္စာအဖို့ ပေးတော်မူပြီ ဖြစ်သည်” (ဆာလံ ၂း၈)။ ထာ၀ရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကား၊ ကိုယ်တော်အား အောင်မြင်ခြင်း၊ ကြီးမြတ်၍ ဘုန်းတန်ခိုးနှင့်ပျက်စီးခြင်း၊ ဆိုးညစ်သောစိတ်ဝိညာဉ် . . . ဤအရာများထဲမှ အောင်မြင် ကျော်လွားပြီးနောက် ဆုလဒ်သရဖူချီးမြင့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏” (Trapp, ibid.).
“အထွန်ုအမြတ် အာဏာစက်ကို လုယူလျှင်၊ ထင်ရှားစွာထုတ်ပြ၍၊ လက်ဝါးကပ်တိုင်အားဖြင့် အောင်ပွဲကို ခံတော်မူပြီ” (ကောလော ၂း၁၅)။
“သေခြင်းတန်ခိုး” ဟူသော ဓမ္မသီချင်း သီဆိုသည်။
ချီးမွမ်းကြ ချီးမွမ်းကြ ဟာလေလုယာ!
(1832-1909 ဖရန့်စီပေါ့ ဘာသာပြန်သော “အမှုပြီးပြီ” )။
ကိုယ်တောသည် အပြစ်သားတို့အား ကယ်တင်လိုငှါ၊ မိမိအသက်ကို သေခြင်း၌ သွန်းလျှက်၊ ယခုတွင်ကြီးမြတ်သော ဘုန်းတန်ခိုးတော်အားဖြင့် စံပယ်တော်မူပြီ ဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်ထံ ချဉ်းကပ် ပါ! လုံး၀အပ်နှံကိုးစားလိုက်ပါ! ယခုပင်လျှင် တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ပါ!
၂။ ဒုတိယ၊ ကိုယ်တော်သည် မတရားသောသူတို့နှင့် ရေတွက်ဝင်ခဲ့သည်။
“ထိုသို့မိမိအသက်ကို သေခြင်းသို့သွန်း၍ မတရားသောသူတို့နှင့် ရေတွက်ဝင်းခြင်းသို့ ရောက်သဖြင့်၊ လူများတို့၏အပြစ်ကိုဆောင်၍ မတရားသောသူတို့အဖို့၊ တောင်းပန်သော ကြောင့်၊ ကြီးမြတ်သောသူတို့နှင့်အတူ သူ့အဖို့ဖြစ်စေခြင်းငှါ၊ ငါခွဲပေးမည်။ အစွမ်းသတ္တိ ရှိသောသူတို့နှင့် လက်ရဥစ္စာများကို သူခွဲဝေလိမ့်မည်”။ (ဟေရှာယ ၅၃း၁၂)။
ခရစ်တော်သည် အပြစ်သားတို့၏ နေရာတွင် အစားဝင်အသေခံခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်သည် ဤ လောက၌ အသက်ရှင်စဉ်တွင်လည်း လူဆိုးများတို့နှင့် ပေါင်းသင်းခဲ့သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရပါ သည်။ ၎င်းအတွက် ဖါရိရှဲများ စောဒကတက်ခဲ့သည်ကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရပါသည်။ ပြက် ရယ်ပြုလျှက် ကိုယ်တော်အား၊
“ဆိုးသောသူတို့နှင့်မိတ်ဆွေ ဖွဲ့သောသူပါတကားဟု ဆိုပြန်ကြ၏” (လုကာ ၇း၃၄)။
“ကိုယ်တော်အသခံတော်မူရာတွင် ဓါးပြနှစ်ဦးကြား၌ အသေခံခဲ့ပါသည်။
“မတရားသောသူတို့နှင့် ရေတွက်ဝင်ခြင်းသို့ ရောက်သဖြင့်”(ဟေရှာယ ၅၃း၁၂)။
ထို့အတွက်ကြောင့် “သူတို့နှင့်ရေတွက်ဝင်သည်” ဟု မိန့်တော်မူပါသည်။ ကိုယ်တော်သည် အပြစ်ရှိသောသူမဟုတ်ပါ။ သို့သော် အပြစ်သားနှစ်ယောက်ကြား အသေခံခဲ့ပါသည်။ (Jamieson, Fausset and Brown, volume 2, p.733). ရှင်မာကုကျမ်း၌လည်း မိန့်တော်မူသည်ကား၊
“ကိုယ်တော်နှင့်တကွ ဓါးပြနှစ်ယောက်တို့ကို လကျာFတော်ဘက်၌တစ်ယောက်၊ လက်ဝဲ တော်ဘက်၌တစ်ယောက်၊ ဠက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ ရိုက်ထားကြ၏။ ထိုသို့မတရားသောသူတို့ နှင့် ရေတွက်ဝင်ခြင်းသို့ ရောက်သည်ဟုဆိုသော ကျမ်းစာချက်ပြည့်စုံခြင်းသို့ ရောက်သ နည်း” (မာကု ၁၅း၂၇-၂၈)။
ဒေါက်တာ ယန်းပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ “သူတို့နှစ်ယောက်သည် သာမန်အပြစ်သားများ မဟုတ်ကြ၊ ဓါးပြကောင်းများ ဖြစ်ကြသည်ဆို၏” (Edward J. Young, Ph.D., The Book of Isaiah, 1972, volume 3, p. 359). သူတို့သည် ဥပဒေကို ချိုးဖောက်သောသူများဖြစ်ကြသည်။ ဂရိဘာသာစကားအား ဖြင့် ဓညေသာသျဓ ဆိုလိုသည်မှာ သိက္ခာမဲ့စွာ ဥပဒေကို ကျူးလွန်သည် (ဠငညန). ထိုသို့ဖြင့် ခရစ်တောသည် ဆိုးသွမ်းသောသူတို့နှင့် ရေတွက်ဝင်ခြင်းဖြစ်သည်! အန်နာဝပ်ဒ်မန်း သီကုံးရေးသား သကဲ့သို့ ဖြစ်သည်။
- ဆိုးသွမ်းအမိုက်မဲ့ဆုံးထဲမှ သင်နှင့်ကျွန်ုပ်အား ကယ်တင်ပြီ
ယေရှုအသွေးတော်အားဖြင့် အပြစ်များကို ဖယ်ရှားနိုင်ကြောင်းသိ
ယေရှုအသွေးတော်အားဖြင့် အပြစ်ကို ဖယ်ရှားကြောင်းသိ
ရညဘျစးရညဘျစးရညဘျစး(၁၉၂၀၊ အန်နာ ဒဗလျှူ ဝတ်ပ်မန်း သီကုံးသော “ကျွန်ုပ်သိပြီ”)
ရှင်လုကာ ခရစ်ဝင်ကျမ်း၌ ထိုဓါးပြနှစ်ယောက်ထဲမှ တစ်ဦးသည် ယေရှုကို ယုံကြည်ပြီး ကယ်တင်ခြင်းရရှိခဲ့သည်။ (လုကာ ၂၃း၃၉-၄၃)။ ဒေါက်တာဂျွန်အာရ်ရိုက် ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ “လူဆိုးတစ်ဦး ကယ်တင်ခံရခြင်းကား ခရစ်တော်သည် အဘယ်သူကိုမှပျက်စီးဖို့ရန် မလိုလား၍ ဖြစ်သည်” ဟုဆို၏။ (John R. Rice., D.D., The King of the Jews, Sword of the Lord, 1980 reprint, p. 475). ဒေါက်တာ မက္ကီး ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊
ထိုဓါးပြနှစ်ယောက်၏ခြားနားချက်က မည့်သည့်အရာနည်း¿ သူတို့နှစ်ယောက်ကြား ကွာ ခြားချက်မရှိလှပါဘူး၊ ထူးခြားချက်ကတော့ သူခိုးတစ်ဦးဟာ ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီး၊ ကျန် တစ်ဦးမှာ ယေရှုကိုမယုံကြည်၍ဖြစ်သည်။ (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson, 1983, Volume IV, p. 354).
“သူသည် မတရားသောသူတို့နှင့် ရေတွက်ဝင်ခြင်းခံခဲ့သည်” ဤကျမ်းကို ထောက်သော်၊ ကိုယ်တော်သည် မိမိအလိုအလျှောက် အပြစ်သားများနေရသို့ အစားဝင်အသေခံပေးခဲ့ပါသည်။ အပြစ် သားများနှင့်ရေတွက်ဝင်ခဲ့သဖြင့် ယခုတွင် အပြစ်သားများ ကယ်တင်ခြင်းခံခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ သို့သော် သင်သည် ယေရှုအားယုံကြည်ကိုးစားခြင်းရှိရမည်။
ခရစ်တော်သည် အပြစ်သားများနှင့်အတူ၊ အပြစ်သားတို့နှင့် ရေတွက်ဝင်ခဲ့သောကြောင့် ယခုတွင် ဘုန်းတန်ခိုးတော်နှင့် စံပယ်လျှက်ရှိသည်။ အပြစ်သားတို့၏အပြစ်ရှိသမျှ ထမ်းရွှက်လျှက်အသေခံခဲ့ သည်။ ထို့ကြောင့် “ကိုယ်တော်သည် မတရားသောသူတို့နှင့် ရေတွက်ဝင်သောကြောင့်” ဂုဏ်ပြုချီး မြောက်ခြင်းခံရပြီဖြစ်သည်။ “ကျွန်ုပ်သိပါပြီ” ဟူသော ဓမ္မသီချင်းကို ဆက်၍သီဆိုသည်!
( ၁၉၂၀- အန်နာ ဒဗလျှူဝတ်ဒ်မန်း သီကုံးသော “ကျွန်ုပ်သိပါပြီ”)
၃။ တတိယ၊ ကိုယ်တော်သည် လူများတို့၏အပြစ်ကို ဆောင်ယူခဲ့သည်၊
“လူအများတို့၏အပြစ်”ဟူသော ကျမ်းပိုဒ်အဆုံးတိုင် အတူတကွမတ်တပ်ရပ်လျှက် ဖတ် ကြားကြပါစို့၊
“ငါတို့၏အပြစ်များကို ကိုယ်တော်သစ်တိုင်ပေါ်မှာ ခံတော်မူပြီ” ဟူ၍ ရှင်ပေတရု ရေးသားဖော်ပြ ခဲ့ပါသည်။
“ငါတို့၏အပြစ်များကို ကိုယ်တော်တိုင်၊ သစ်တိုင်ပေါ်မှာ ခံတော်မူပြီ” (၂ပေ ၂း၂၄)။
ကိုယ်စားအသေခံပေးခြင်းဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းခံရခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်သည် အပြစ်သားတို့၏ အပြစ်ကို မိမိပေါ်တင်တော်မူပြီး လက်ဝါးကပ်တိုင်၌ အသေခံတော်မူခြင်းဖြစ်သည်။ အပြစ်၏အဖိုး အခကို ကိုယ်တော်တိုင် ပေးဆပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်ဘုရား၏ကိုယ်စား အသေခံခြင်းမရှိလျှင် ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းဟူ၍ မရှိနိုင်ပေ။ ကိုယ်စားအသေခံပေးခြင်းသည် ယခုတွင် ဧဝံဂေလိသတင်း ကောင်း၏အခြေအမြစ် ဖြစ်လာပါသည်။ စပါဂျန်ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊
ယခုတွင် ဤအဖြစ်အပျက်သုံးချက်တွင်၊ ကိုယ်တော်သည် မိမိအသက်ဝိညာဉ်ကို အပြစ် သားတို့၏ အပြစ်ဒဏ်အတွက်အသေခံခြင်း၊ မတရားသောသူတို့နှင့် ရောနှော၍အသေခံ ခြင်း အပြစ်ဝန်ထုတ်၊ ဝန်ပိုးရှိသမျှဖြေလွတ်ခြင်း၊ အပြစ်ကိုဖယ်ရှားပေးခြင်း၊ စသောအရာတို့ သည် ကိုယ်တော်၏ဘုန်းတော်အတွက် အထူးသဖြင့် အကြောင်းအရင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ထာ၀ရဘုရားက ဤအချက်သုံးချက်အပြီး ကိုယ်တော်အား ကြီးမြတ်သောသူတို့နှင့်ဥစ္စာ အမွေခွဲပေးသည့်အကြောင်း၊ နောက်တစ်ချက်တွေ့ရအုံးမည် ဖြစ်သည်။ (C. H. Spurgeon, The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, 1975 reprint, volume XXXV, page 93).
“ကျွန်ုပ်သိပါပြီ”! ဟူသော သံပြိုင်ကို ထပ်ဆိုသည်!
၄။ စတုတ္ထ၊ ကိုယ်တော်သည် မတရားသောသူတို့အဖို့ တောင်းပန်ခဲ့သည်!
“မတရားသော သူတို့အဖို့ တောင်းပန်သောကြောင့်” (ဟေရှာယ ၅၃း၁၂)။
ကားတိုင်ပေါ်တွင်၊ ခရစ်တော်သည် အပြစ်သားတို့အဖို့ “တောင်းပန်ပေးခဲ့သည်” ကိုယ်တော်မိန့်တော်မူ သည်ကား၊
“ယေရှုကလည်း အိုအဘ၊ သူတို့၏အပြစ်ကို လွတ်တော်မူပါ။ သူတို့သည် ကိုယ်ပြုသော အမှုကို မသိကြဟု မြွတ်ဆိုတော်မူ၏” (လုကာ ၂၃း၃၄)။
ထိုသို့ကားတိုင်ထက် ချိတ်ဆွဲစဉ် အပြစ်သားတို့အဖို့ တောင်းပန်ခဲ့ပါသည်။
ယခုတွင်လည်း ကောင်းကင်ဘုံမှ အပြစ်သားတို့အဖို့ ဆုတောင်းပေးနေပါသည်။
“ကာလအစဉ်အသက်ရှင်သောကြောင့်၊ သူတို့ကို အစဉ်ကယ်တင်ခြင်းငှါ တတ်နိုင်တော်မူ ၏” (ဟေဗြဲ ၇း၂၅)။
ကိုယ်တော်သည် ကားတိုင်ထက်တွင်၊ အပြစ်သားတို့၏နေရာ၌ အစားဝင်အသေခံခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုတွင်လည်း၊ ကောင်းကင်ဘုံ အဖခမည်းတော်၏လကျာFတော်ဘက်ထိုင်လျှက် အပြစ်သားတို့အဖို့ ဆုတောင်းပေးနေပါသည်။
မှတ်သားကြည့်ပါ။ အပြစ်သားတို့အဖို့ ကြားဝင်တောင်းပန်ပေးသောကြောင့် ယခုတွင် ကိုယ်တော် သည် ခမည်းတော်၏လက်ျာဘက်တွင် စံပယ်တော်မူပြီ မဟုတ်ပါလား။ ခရစ်တော်၏ဘုန်းတန်ခိုး တော်၊ ချီးမြောက်ခြင်းအားလုံးသည် အပြစ်သားတို့ကို ကယ်တင်ခြင်းနှင့် ပါတ်သတ်နေပါသည်!
“ထိုသို့လူ၏ဂုဏ်အင်လက္ခဏာနှင့် ပြည့်စုံလျှက်၊ အသေခံခြင်းသာမဟုတ်၊ လက်ဝါးကပ် တိုင်မှာ အသေခံခြင်းတိုင်အောင် အစေကျွန်ခံ၍ ကိုယ့်ကိုယ်ကို နှိမ့်ချတော်မူ၏။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်သည် ကိုယ်တော်ကို အလွန်ချီးမြောက်၍ ဘွဲ့နာမတကာတို့ထက် ကြီးမြတ် သောဘွဲJUနာမတော်ကို ပေးသနားတော်မူ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ကောင်းကင်သတ္တဝါ၊ မြေ ကြီးသတ္တဝါ၊ မြေကြီးအောက်၌ရှိသော သတ္တဝါတည်းဟူသော ခပ်သိမ်းသောသတ္တဝါတို့ သည် ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကို ဒူးထောက်၍ ယေရှုခရစ်တော်သည် သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟု နုတ်နှင့်ဝန်ခံသဖြင့်၊ ခမည်းတော်ဘုရား၏ဘုန်းအသရေတော်ကို ထင်ရှားစေကြမည် အ ကြောင်းတည်း”
သို့သော် မှတ်သားရန်မှာ၊ ခရစ်တော်အား မလိုလားသောသူတို့အဖို့၊ ခရစ်တော်၏တန်ခိုးတော်သည် သူ့အား မကယ်တင်ပေ။ စပါဂျန်ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊
အာကယ်၍ သင်၌အပြစ်မရှိပါက၊ ကိုယ်တော်သင့်အား သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မည်မဟုတ်ပါ။ ကယ်တင်မည်ထင်ပါသလား¿သင်သည် ကောင်းမွန်နေပြီး၊ လေးစားထိုက်သောသူ၊ အမှား ကိုမပြုသောသူဖြစ်သဖြင့်၊ ယေရှုသင့်အား ကယ်တင်ပေးစရာလိုပါသလား¿ သင်သည် မိမိလမ်းအတိုင်းသွားမည်၊ မိမိကိုယ်ကိုသာ ဂရုစိုက်မည်။ ဒါဟာမိုက်မဲမှုပါ မဟုတ်လား¿ သင်သည် မိမိ၏စိတ်နှလုံးသားအတွင်းက အပြစ်များကို မြင်သော်လည်း၊ သန့်ရှင်းအောင် မလုပ်ဆောင်၊ သင့်နှလုံးသားသည် ဆိုးညှစ်မှုနှင့်ပြန့်နေမည်ဖြစ်သည်။ အို၊ သင်သည် မိမိအပြစ်ကို မြင်နိုင်မည်ဆိုလျှင်၊ ထိုအရာမှ သင်လွတ်မြောက်ပြီး ဖြောင့်မတ်သောသူဖြစ် မည်ဖြစ်သည်! အကယ်၍ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ဖို့ ဆန္ဒမရှိပါက၊ ယေရှုသင့်အား မကယ်တင် နိုင်ပါ။ ကိုယ်တော်သည် အပြစ်သားတို့ဘ၀မှ ဘုန်းတော်ချီးမြောက်ခြင်းရရှိတာဖြစ်ပြီး မိမိ ကိုယ်ကို လိမ်ညာခြင်းမှ မဟုတ်ပါ။ သင့်အပြစ်ကို သင်သိပြီး၊ ဝန်ချတောင်းပန်မည် ဆိုလျှင်၊ စတ္ထုထမြောက်ဖြစ်သော အပြစ်သားတို့အဖို့ ယေရှုတောင်းပန်သောအသံကြောင့် သင်သည် အပြစ်လွတ်ခြင်းခံရမည်ဖြစ်သည်။ ယေရှုသည် အပြစ်သားကဲ့သို့ သင့်နေရာ၌ အသေခံခဲ့ပြီးဖြစ်သဖြင့် ဘုန်းအသရေတော်၊ တန်ခိုးကြီးခြင်းဖြင် စံပယ်တော်မူခဲ့ပြီဖြစ် သည်။ သင့်အပြစ်အတွက် ဝေဒနာခံပေးသော ယေရှုထံ စိတ်နှလုံးအရူအးကင်းမဲ ချဉ်းကပ်ဖို့ ကျွန်ုပ်တောင်းဆိုပါရစေ! အကယ်၍ သင်ယေရှုထံချဉ်းကပ်မည်ဆိုလျှင်၊ သင့်အား မငြင်း ပယ်ပါ။ သင်သည် ကယ်တင်ခြင်းထာ၀ရရရှိမည် ဖြစ်သည်။ (Spurgeon, ibid, page 95).
အာမင်! “ကျွန်ုပ်သိပါပြီ” ဟူသော ဓမ္မသီချင်း ထပ်ဆိုပါသည်!
( ၁၉၂၀၊ အန်နာ ဒဗလျှူ.ဝတ်ဒ်မန်း သီကုံးသော “ကျွန်ုပ်သိပါပြီ”)
ယေရှုခရစ်၏အသွေးတော်ဖြင့် သင့်အပြစ်ဆေးကြောဖို့ သင်အလိုရှိပါက၊ ဆွေးနွေးခန်းဆီသို့ တက် လှမ်းလာခဲ့ကြပါ။ ဒေါက်တာ ကေကန်က ဦးဆောင်ပြီး ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးပါလိမ့်မည်။ မစ္စတာ ဂရိဖက်စ် သံပြိုင်သီဆိုစဉ် ထိုဆွေးနွေးခန်းသို့ ဖြည်းညင်းစွာသွားကြပါ။
မစ္စတာလီက ၎င်းဆွေးနွေးခန်းသို့ လူတို့အဖို့ ဦးဆောင်ဆုတောင်းပေးပါသည်။
-ဒေသနာတော်မတိုင်ခင် ဒေါက်တာ ဂရိတန် အယ်လ်ချန်မှ ဟေရှာယ ၅၃း၆-၁၂ ကိုဖတ်ကြား ပေးပါသည်။
-ဒေသနာတော် မတိုင်ခင် မစ္စတာဘင်ဂျင်မင်ခင်ကိတ်ဂရိဖက်စ်မှ (၁၉၂၀၊ အန်နာ ဒဗလျှူဝတ်ဒ်မန်း သီကုံးသော “ကျွန်ုပ်သိပါပြီ” ဟူသော ဓမ္မချင်းကို သီဆိုပေးပါသည်။
(ဟေရှာယ ၅၃ထဲက ၁၄ခုမြောက်သောဒေသနာတော်)
(ဟေရှာယ ၅၃း၁၂)က၊ (ယောဟန် ၁၉း၃၀၊ ၁ဝး၁၇)၊ (၁ပေ ၃း၁၈)၊
(ဆာလံ ၂း၈)၊ (ကောလော ၂း၁၅)။
(ဟေရှာယ ၅၃း၁၂)ခ၊၊ (လုကာ ၇း၃၄)၊ (မာကု ၁၅း၂၇-၂၈)၊
(ဟေရှာယ ၅၃း၁၂)ဂ၊ (၁ပေ ၂း၂၄)။
(ဟေရှာယ ၅၃း၁၂)ဃ၊ (လုကာ ၂၃း၃၄)၊ (ဟေဗြဲ ၇း၂၅)၊ (ဖိလိပ္ပိ ၂း၈-၁၁)။